CEO: Ammy - Tianjin TheOne Metal Products Co., Ltd.
American Type Hose Clamp Ine Handle
ChiGerman Type Hose Clamp
ChiGerman Type Hose Clamp Ine Handle
Ruzivo Rwemata American Type Hose Clamp
Stainless Simbi Cable Tie
Kaviri Bolt Kaviri Band Pipe Clamp
Pipe Clamp Ine Rubber
Gadzira Channel Pipe Clamp
Kaviri Wire Hose Clamp
Nzeve Hose Clamp
Ammy, Akapedza kosi yeMBA manejimendi muna 2017, iye zvino ndiye CEO weTianjin TheOne Metal Products Co., Ltd, uye mutungamiri weBazi reKutengeserana Kwekunze.
Muna 2004, Ammy akapinda mumunda wehose clamps, akashanda mufekitari yakakurumbira hose clamp.Mukati memakore matatu, asimuka kubva kumumiriri akajairika kuenda kune Marketing Manager anotungamira vatengesi makumi matatu, anoshandira vatengi vanorema vanopa eBay, Amazon, Walmart,Home Depot nezvimwe.
Makore eruzivo rwekutengeserana kunze kwenyika akamuita kuti aone tarisiro huru yemusika wehose clamp, saka akasiya chinzvimbo chinobhadhara zvakanyanya, akatsunga kumisa fekitori yake neboka revatengesi vekunze, uye akatengesa zviri nani uye zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zve hose clamp kupasi.
Muna Gumiguru 2008, Tianjin The One Metal Products Co., Ltd. yakavambwa.Mushure memakore gumi nematatu ebudiriro, yakagadziridzwa kuita combo yekugadzira nekutengesa nezvikwata zviviri zvekutengeserana kwenyika.Ane makore gumi nemanomwe eruzivo muindasitiri yehose clamps yake, zvikwata zvinochengeta ingangoita 18% kukura mukutengesa kwepagore chaiko.
Muna 2018, akapihwa zita rekuremekedza re "Mudiki Entrepreneur Expert" neDare redu reDunhu.
Iye akanakisa, zvakare mutungamiriri akasimba pabasa, uye muhupenyu, imhuri ine hungwaru inotumira kudziya kumunhu wese.Anogara achiomerera pa "HOME" sepakati, kuitira kuti mushandi wese ashande achifara uye akatsiga mukambani.Kubasa ndiye shefu, zvisinei ihanzvadzi yedu muhupenyu.
SeMukuru Mukuru weTheOne Metal, chinangwa chake ndechekuita kuti mabhomba edu azivikanwe kune dzimwe nyika.Kusvika 2020, takawana vatengi kubva kunyika zana nemakumi mashanu.Mumusika mukuru, mutengo wepagore unosvika $8.2million.
Mune ramangwana, pasi pehutungamiriri hwaAmmy, TheOne Metal yevatengesi vekunze timu ichagadzira misika yakawanda yenyika uye kuunza zviri nani zvemhando hose clamp zvigadzirwa kupasi.